Jesu Anopa Chidzidzo Panyaya Yokukanganwira | Upenyu hwaJesu
UNOFANIRA KUKANGANWIRA KANOMWE HERE?
MUFANANIDZO WEMURANDA ASINGAKANGANWIRI MUMWE WAKE
Petro anzwa Jesu achipa zano rokuti kana hama dzatadzirana dzinofanira kuedza kugadzirisana dzoga. Asi Petro anenge ari kufunga kuti munhu anofanira kuverenga kuti izvozvo zvinofanira kuitika kangani.
Petro anobvunza kuti: “Ishe, hama yangu inganditadzira kangani ini ndichiikanganwira? Kusvikira kukanomwe here?” Vamwe vakuru vechitendero vanodzidzisa kuti munhu anofanira kukanganwirwa kanosvika katatu. Saka Petro ari kufunga kuti akakanganwira hama “kusvikira kukanomwe” anenge aratidza kuva munhu akanaka zvikuru.—Mateu 18:21.
Asi iko kutomboverenga kwacho kuti watadzirwa kangani hakupindirani nezviri kudzidziswa naJesu. Saka anopindura Petro kuti: “Ndinoti kwauri, kwete, kusvikira kukanomwe, asi, kusvikira kukane makumi manomwe nekanomwe.” (Mateu 18:22) Izvi zvinoreva kuramba uchingokanganwira. Petro anofanira kuramba achingokanganwira hama yake kusvikira narini.
Jesu anobva audza Petro nevamwe vake mufananidzo unovabatsira kunzwisisa kuti vanofanira kukanganwira. Ndewemuranda anotadza kutevedzera tenzi wake anokanganwira. Tenzi wacho ndimambo ari kuda kuti varanda vake vamubhadhare zvikwereti zvavainazvo naye. Mambo anodana mumwe muranda ane chikwereti chakakura chematarenda 10- 000 [madhinari 60 000 000]. Muranda wacho haana kana chokumubhadhara nacho. Saka mambo anoti muranda wacho, mudzimai wake nevana vatengeswe kuti chikwereti chacho chibhadharwe. Muranda wacho anobva agwadamira tenzi wake omukumbira kuti amuitire mwoyo murefu achiti: “Ndichakuripai zvinhu zvose.”—Mateu 18:26.
Mambo wacho anomunzwira tsitsi odzima chikwereti chose ichocho. Muranda wacho paanongonzwirwa ngoni kudaro, anobva aenda kune mumwe muranda ane chikwereti chake chemadhinari 100. Anobva amubata pahuro omudzipa achiti: “Ripa zvinhu zvose zvawakakwereta.” Asi muranda wacho anogwadamira mumwe wake omukumbira kuti amuitire mwoyo murefu achiti: “Ndichakuripa.” (Mateu 18:28, 29) Asi muranda uya wokuregererwa namambo haatevedzeri zvaakaitirwa natenzi wake. Anoita kuti mumwe wake, ane chikwereti naye chemari shomanana, akandwe mujeri kusvikira abhadhara chikwereti chake.
Jesu anobva arondedzera kuti vamwe varanda pavanoona utsinye uhwu hwaitwa, vanoenda vonoudza tenzi wavo, uyo anoshatirwa odana muranda uyu oti kwaari: “Muranda akaipa, ndakakudzimira chikwereti chako chose chiya, pawakanditeterera. Waisafanirawo here, kunge wakanzwira ngoni muranda uyu akaita sewe, sokukunzwirawo ngoni kwandakaita?” Mambo wacho nehasha anobva aita kuti muranda uyu asinganzwiri vamwe ngoni akandwe mujeri kusvikira abhadhara chikwereti chake chose. Jesu anozopedzisa achiti: “Baba vangu vokudenga vachakuitiraiwo saizvozvo kana mumwe nomumwe wenyu asingakanganwiri hama yake zvichibva pamwoyo.”—Mateu 18:32-35.
Apa tinowana chidzidzo chakasimba chokukanganwira! Mwari akatikanganwira chikwereti chakakura chechivi. Chero chii zvacho chatingatadzirwa nehama yedu yechiKristu hachienzani nechikwereti ichi chatakakanganwirwa. Uye Jehovha anotikanganwira kakawandisa, kwete kamwe chete. Zvino isu tinotadzirwa kashomanana chete tingatadzewo here kuramba tichikanganwira hama yedu, kunyange pazvinonzwisisika kuti tagumburwa? Sokudzidzisa kwakaita Jesu paMharidzo yepaGomo, Mwari achatikanganwira ‘zvivi zvedu, sezvatinokanganwirawo vanotitadzira.’—Mateu 6:12.
Chii chaita kuti Petro abvunze nezvokukanganwira hama yake, uye nei angave afunga kuti kukanganwira kanomwe kuva munhu akanaka zvikuru?
Zvakaitwa namambo paakatetererwa nemuranda wake zvakasiyana papi nezvakazoitwa nemuranda wacho kune mumwe wake?
Tinodzidzei pamufananidzo waJesu?